Ukuhlaziywa Kwesimo Esikhona Semkhakha Wezindlu Zangasese
Kancane kancane abazali bayabazi ubunyoninco nokuzwela kwezinsana nezikhumba zezingane ezincane, futhi badla imikhiqizo yezingane eyanda ngokwengeziwe. Bathengela izingane zabo imikhiqizo ephephile, ethembekile futhi ethembekile. Izinkampani eziningi zigxile embonini yezingane. “Okulandelayo yi-analys ...
Umkhuba Wentuthuko Wemboni Yezindlu Zangasese
Ku-2019, ukuthengiswa kwemakethe yezindlu zangasese kufinyelele ku-118.26 billion US dollars, ngezinga lokukhula lika-10% -15%. Kulindeleke ukuthi iqhubeke nokukhula eminyakeni emihlanu ezayo, kepha izinga lokukhula kulindeleke ukuthi lehle ngemuva kuka-2023. Okulandelayo ukuhlaziywa kokuthuthuka kwethoyilethi ...
Ngokusho Kokuthungwa Kwezinwele, Khetha I-Wax Efanele Yezinwele Ukwakha Ukubukeka Komuntu
Ngokuya ngokuthungwa kwezinwele, khetha i-wax efanelekile yezinwele ukudala ukubukeka kwendoda Abesilisa bathanda kakhulu ukuphola futhi bafuna ukuba nesitayela. Ngalesi sikhathi, bavame ukuthanda ukufaka i-wax ezinweleni zabo, kepha ingabe uyisebenzisile i-wax? Eqinisweni, kufanele kukhethwe i-wax yezinwele ...
Ungayikhetha Kanjani I-Wax Yezinwele NeGel Yezinwele (Futha) Ngokufanele
Ungayikhetha kanjani i-wax yezinwele nejeli yezinwele (fafaza) ngokufanele Manje abantu bayaphuma bayodlala noma basebenze, kuyinqubo ebalulekile emane yenze isitayela sezinwele ngaphambi kokuphuma. Imvamisa imikhiqizo yezinwele iyinwele yezinwele nejeli yezinwele (isifutho). Bakhethe ngokuya ngokusetshenziswa okuthile kwe ...
Ama-Air Fresheners Ama-air fresheners enziwe kakhulu nge-ethanol, essence, amanzi akhethiwe nokunye. I-Vehicle air freshener, yaziwa nangokuthi "amakha ezemvelo", njengamanje iyindlela ejwayelekile yokuhlanza imvelo nokwenza ngcono ikhwalithi yomoya emotweni. Ngoba kulula, ukusetshenziswa okulula ...